Arduino ဆိုတာဘာလဲ? - Myanmar End User
DIYSelf ImprovementTechnology Explained
By Myanmar End User March 20, 2017 2999 views
Arduino ဆိုတာကတော့ open-source platform ပေါ်အခြေခံထားတဲ့ micro-controller လေးပါ။ Micro-controller ဆိုတဲ့အတွက် သူ့မှာ Processor ပါမယ်၊ RAM ပါမယ်၊ ROM ပါမယ်၊ နောက် GPIO pins တွေပါမယ်ပေါ့။ Arduino ကို 2005 ခုနှစ်က Italy နိုင်ငံမှာ Massimo Banzi နဲ့ နောက် co-founder လေးယောက်ကစပြီး introduce လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
Arduino ကိုသုံးပြီး ဘာတွေလုပ်လို့ရလဲ ?
Arduino ကိုသုံးပြီး motor တွေ sensor တွေကနေတစ်ဆင့် ကိုယ့် ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ အရာတွေကို ချိတ်ဆက် ထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ – Home Automation လို project မျိုးတွေ၊ 3D printer လို project မျိုးတွေ၊ Robotic project မျိုးတွေ အစရှိသဖြင့် project ပေါင်းမြောက်များစွာကိုလဲ Arduino ကိုအသုံးပြုပြီး ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ Arduino ကို stand-alone project မျိုးတွေမှာ သုံးလို့ရတဲ့အပြင် android apps တွေ computer ကအခြား software တွေ (ဥပမာ – processing) နဲ့လည်း ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Arduino board အမျိုးအစားများ
Arduino borad တွေမှာ Uno, Mega, Nano, lily pad အစရှိသဖြင့် board အမျိုးအစားတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ Board အမျိုးအစားတစ်ခုနဲ့ တစ်ခု ဘာကွာသလဲ ဆိုတော့ သူ့မှာပါတဲ့ processor တွေ GPIO pins အရေအတွက် တွေ storage ပမာဏတွေ စတဲ့ သူ့ရဲ့ specification တွေကွာခြားပါတယ်။
Low Cost : Arduino ရဲ့ အားသာချက်တွေကတော့ boards တွေဟာ ဈေးနှုန်း ချိုသာပါတယ်။
မြန်မာငွေ ၆၀၀၀ လောက်ရှိရင်စပြီး project တွေလုပ်လို့ ရပါပြီ။
Open Source: နောက် Arduino ဟာ open-source platform ဖြစ်တဲ့အတွက် သူ့ရဲ့ circuit design တွေကို free ချပေးထားပါတယ်။ အဲဒီအတွက် board design တွေကို ကိုယ့် version နဲ့ ကိုယ်ထပ်ပြီး improve လုပ်နိုင်ပါတယ်။ Program ရေးဖို့အတွက် IDE (Integrated Development Environment)ကိုလဲ သူ့ main site ဖြစ်တဲ့ www.arduino.cc မှာ free download ဆွဲနိုင်ပါတယ်။ Online ပေါ် မှာလဲ project examples တွေ tutorials တွေ အများအပြားရှိတဲ့အတွက် လေ့လာရလွယ်ကူပါတယ်။
Cross platform: Arduino software တွေဟာ cross-platform ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာကတော့ OS မရွေးပါဘူး။ တစ်ချို့ micro-controller တွေဟာ window နဲ့ compatible မဖြစ်တာ အခြား OS တွေနဲ့ compatible မဖြစ်တာမျိုးတွေ ရှိတတ်ပါတယ်။ Arduino software တွေကတော့ Window ရော၊ Mac ရော၊ Linux OS တွေမှာပါအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Easy Programming Environment: Arduino အတွက် programming environment ကလည်း ရိုးရှင်းလွယ်ကူပါတယ်။ Programming နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ အခြေခံ Knowledge လောက်ရှိရင် စရေးလို့ရပါပြီ။ Arduino program တွေကို C language နဲ့ရေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် C language စစ်စစ်မျိုးမဟုတ်ဘဲ သူ့ကို modify ပြန်လုပ်ထားတဲ့ ပုံစံမျိုးပါ။ Arduino program တွေကို sketches လို့ခေါ်ပါတယ်။
ARDUINO ကို ဘယ်လိုလူမျိုးတွေ သုံးသင့်သလဲ?
Arduino board တွေဟာ လေ့လာရလွယ်ကူခြင်း၊ အသုံးပြုရလွယ်ကူခြင်းတွေကြောင့် အခုမှ စလေ့လာမယ့်သူတွေ၊ စပြီ project တွေလုပ်မယ့် ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေ၊ ဝါသနာရှင်တွေအတွက် သင့်တော်ပါတယ်။
Phone Wa Science ကူးယူဖော်ပြသည်။
MPT SIM Card များကိုလည်း Messenger မှ မှတ်ပုံတင်နိုင်ပြီ
By Win Thet Oo2days ago 0
By Win Thet Oo4days ago 0
By Win Thet Oo5days ago 0
By Win Thet Oo May 12, 2019 0
Creation လောကရဲ့ဘုရင် Adobe က iPad pro အတွက် App အသစ်တစ်ခုမိတ်ဆက်။
October 11, 2017 107353 views
October 12, 2017 75321 views
February 24, 2017 41402 views
November 30, 2016 24192 views